भारतसँग सिरिज खेल्न अष्ट्रेलियाद्वारा टोली घोषणा, को–कोले पाए स्थान ? – Everest Dainik – News from Nepal
भारतसँग सिरिज खेल्न अष्ट्रेलियाद्वारा टोली घोषणा, को–कोले पाए स्थान ?
काठमाडौं, माघ २४ । भारतविरुद्ध दुई टी–२० र पाँच एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्न अष्ट्रेलियाले टोली घोषणा गरेको छ । मिचेल स्टार्कको स्थानमा केन रिचर्डसनलाई समावेश गर्दै अष्टेलियाले टोली घोषणा गरेको हो । उनी घाइते भएपछि टोलीमा अट्न सकेनन् ।
स्टार्क यसैसाता श्रीलंकाबिरुद्धको दोस्रो टेष्टमा १० विकेट लिदैं म्यान अफ द म्याच भएका थिए । सिरिजमा तिब्र गतिका बलर स्टार्कबिना मैदान उत्रिन लागेका अष्ट्रेलियाले भारतको बेङलोरमा फ्रेबुअरी २४ मा पहिलो ट्वान्टी–२० खेल खेल्नेछ ।
अष्ट्रेलियाको टोलीः आरोन फिन्च (कप्तान) उम्मान खाज्वा, शाउन मार्स, पिटर हान्डस्कम्ब, ग्लेन म्याक्सवेल, एस्टोन टुर्नर, मार्कुस स्टोनिस, एलेक्स, पट कुमिन्स, नाथन काउल्टर, झय रिचार्डसन, केन रिचार्डसन,जासन वेन्क्रप्ट, नाथन लियोन, एडम जाम्पा, र डिअर्च शर्ट